Budata Cafe Master APK maka Android
Budata Cafe Master
Free Budata maka Android (97.00 MB)
Budata Cafe Master,
Cafe Master egwuregwu bụ egwuregwu egwuregwu ịme egwuregwu ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gị yana sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Jikere ịghọ onye nwe ụlọ cafe. Nke a dị mfe ma na-atọ ụtọ karịa ịdị adị. Ọ bụrụ nitinye usoro egosiri gị nke ọma, ị nwere ike ịmepụta ihe oriri na ihe ọ drinksụ legendụ a ma ama. Nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na nnukwu kichin. Inwere ihe niile, ihe foduru bu ime ka ihe di ebube.
Ebe dị iche iche ị nwere ike iji oge gị nefu wee nweta ozi bara uru. Kọfị, waffles ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ ... Nhọrọ ga-abawanye dị ka ihe ịga nke ọma gị. Ọ bụ ya mere ị ga - eji meziwanye onwe gị site na iwepụ ihe ọma. Have ga-arụsi ọrụ ike iji kwalite cafe gị.
Ọ bụrụ nịchọrọ nezi ihe ịga nke ọma, ị kwesịrị ịnwa ịbụ onye isi nri kachasị mma na mpaghara a. Ọ bụ egwuregwu siri ike igwu egwu, o siri ike nnabata, mana ọ na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ nịchọrọ ịbụ onye isi egwuregwu a, ị nwere ike ibudata egwuregwu ahụ nefu.
Cafe Master Ụdịdị
Nha faịlụ: 97.00 MB